Dzidziso Itsva Yevadzidzi »Hodges University
Kugamuchirwa kuHodges University!
Hodges University's New Student Orientation (NSO) inobatsira edu maHodges 'Hawks mukugadzirira ruzivo rwako rwekudzidza!
Iwo mabhatani pazasi anokutungamira iwe kuburikidza nemaitiro uye nekupa rakakosha ruzivo nezve yedu University. Tanga ikozvino uye shanyira chero nguva iwe uchida rubatsiro.
Mharidzo kubva kuMutungamiri Dr. Meyer
Hodges University - yakazvimiririra isingabatsiri institution - inogadzirira vadzidzi kuti vawedzere kudzidza kwakakwirira mune kwavo kuita kwehunyanzvi, nehunyanzvi.
Kuti udzidze zvakawanda nezvekuti nei Hodges University iri yunivhesiti yakasarudzika muSouthwest Florida, tinya pano.
Ziva Yako Campus
Ziva Yedu Campus
Fort Myers Campus Kuvaka U naH
Fort Myers Campus Kuvaka U
Mari Yekubatsira uye Maakaundi evadzidzi
Yevadzidzi Services, Registrar, uye Admissions
Mudzidzi Union Hutano Sayenzi Kuvaka - U
Nyoresa Pamhepo Kupfuura HU Yega-Sevhisi!
HU Kuzvishandira-inobvumidza iwe kunyoresa kana kukumbira kunyoreswa kune chero kosi muchikamu chiri kuuya, 24/7, 100% online:
Pasi pechikamu cheUU-Chekuzvishandira, tinya kunyoresa uye Degree Planning
Kuti usimbise purogiramu yako yekosi, tinya pane Chirongwa uye Chirongwa
MyHUgo & HU Kuzvishandira
MyHUgo ndeye Hodges University yepamhepo yevadzidzi portal portal uko vadzidzi vese vanogona kukurumidza kuwana HU Kuzvishandira. Ne myHUgo, unogona kuwana ruzivo rwako uye kuitisa bhizinesi rako reYunivhesiti online.
Paunopinda iwe kune iyo portal MyHUgo chinongedzo kune yako email inoonekwa pane iyo huru peji. Hodges anoshandisa yako email email account senzira yepamutemo yekutaurirana newe.
Canvas ndeye Hodges University iri online Kudzidza Management Sisitimu, uko varairidzi uye vadzidzi vanogona kuwana zvekudzidzira kosi, kuendesa migove, kutaurirana uye kushandira pamwe online.
Zvimwe Zvishandiso & Tsigiro
Hodges Yunivhesiti ine yakazvipira IT timu yekubatsira vadzidzi vane dzakasiyana siyana tekinoroji nyaya dzavanogona kunge vainadzo. Vadzidzi vanogona kuendesa uye kuteedzera chikumbiro chetekinoroji rutsigiro pamhepo, uye kutsvaga kwekuzvibatsira-kugadzirisa matambudziko uye sei-kune ruzivo. Vadzidzi vanoshandisa yavo Hodges email kero uye password kuti vapinde mukati.
IT Rubatsiro Desk Rutsigiro
Varaibhurari vari pano kuti vakubatsire kusarudza uye kutsvaga zviwanikwa. Kunyangwe iwe uchida rubatsiro kutsvaga mumaraibhurari dhatabhesi kana kufambisa iyo APA bhuku, vashandi vemaraibhurari varipo mumunhu, nefoni kana email.
Iri bhuku revadzidzi richashanda segwara paunotanga nekuenderera mberi nebasa rako redzidzo neHodges University.
Iyo yeyunivhesiti katarogu ichashanda segwara remitemo yemisangano yemitemo yakanangana nezvirongwa zveHodges University zvedzidzo.
Kunyoresa Mitemo & Mamiriro
Mitemo yekunyoresa uye mamiriro anopa chibvumirano pakati pemudzidzi neYunivhesiti kune ese makosi ekunyoresa makosi.
Yevadzidzi Zviwanikwa Peji
Peji rezvinhu zvevadzidzi rinowanikwa kune vese vadzidzi maunowana syllabi yekosi, hofisi yefakisheni maawa, zvinyorwa, neruzivo rwekutaurirana kune mamwe madhipatimendi eyunivhesiti. Vadzidzi vanogona kuwana iri peji nekupinda mukati meMYHUgo.
Peji Yevadzidzi Resource
Mari Yekubatsira Mapakeji
Iyo yekubatsira yemari package inogona kuve nemubatanidzwa wemari, zvikwereti, uye / kana basa-kudzidza mari. Kugamuchirwa kwemubairo uyu kunoenderana padanho remari iripo uye kukodzera kwako sekugadzwa neFree Application yeFederal Student Aid (FAFSA).
Chikwata cheVadzidzi maAccount vanogona kubatsira kubhadharisa, kunzwisisa chikoro uye mubhadharo, kuseta zvirongwa zvekubhadhara, nezvimwe.
Hodges Yunivhesiti inopa dzakasiyana siyana nzira dzekubhadhara sarudzo dzekubhadhara muripo uye mubhadharo muzvikamu zvepamwedzi nepakati. Kuti uwane rumwe ruzivo, vadzidzi vanogona kupinda muMyhugo yavo voenda ku Ruzivo rweAccount yeVadzidzi.
Hodges University yakabatana neBankMobile kuti ipe dzimwe sarudzo uye nekukurumidza kuwana kune ako ekudzoserwa.
Mauto neVeteran Services
KuHodges University, iwe uchaona kuti kuve unoshamwaridzika wemauto hachisi chimwe chinhu chatinotaura, iri danho rerutsigiro runopfuura kupfuura mukirasi.
Yedu Hofisi yeVadzidzi Chiitiko yakatsaurira vadzidzi vanachipangamazano vari pano kubatsira vadzidzi kukudziridza -nguva refu zvedzidzo zvirongwa uye kumisikidza pfupi-pfupi zvibodzwa kuzadzisa izvo zvirongwa.
Fonera Yedzidzo Kuraira pa800-466-0019
Email Kuraimendi Kuraira
Career Services ibasa remahara revadzidzi uye alumni kuti vadzidze zvakawanda nezve avo vakasarudzika masimi ebasa uye nekuvandudza zvirongwa zvebasa.
Hodges University inoshingairira kutsigira kodzero dzevadzidzi vane hurema kuti vawane zvakaenzana kuwana dzidzo.
Hodges University yakazvipira kuumba nekuchengetedza nharaunda yekudzidza uko vanhu vese vanotora chikamu muzviitiko zveYunivhesiti vanogona kudzidza pamwechete mumhepo isina mhando dzese dzekushungurudza, kushandisa zvisizvo, rusaruro, kufungira kana kutyisidzira.
Kodzero dzezvakavanzika (FERPA)
Pasi pemirairidzo yeFERPA, vadzidzi vane kodzero (1) yekuongorora nekudzokorora rekodhi ravo revadzidzi, (2) kutsvaga marekodhi, (3) kubvumidzwa kuburitswa, uye (4) kufaira chichemo.
Hodges Yunivhesiti Hofisi yeCampus Kuchengetedza inoisa pamberi kuchengetedzwa kwevadzidzi chero nguva iyo kambasi yakazaruka.
Makorokoto, Wapedza Nyowani Mudzidzi Kudzidziswa!
Ndinokutendai nekutora nguva yekuziva Hodges University uye nedhipatimendi rekutsigira vadzidzi rinowanikwa kune vese vadzidzi. Semudzidzi, iwe uchave nekugona kune ino saiti panguva yako yese yebasa kuHodges. Hatigoni kumirira kukuona iwe uchiyambuka nhanho kana chijana chako chekupedza kudzidza!
Wava Hawk. Tarisa chikamu!
Unogona kuratidza kudada kwechikoro chako nekutenga pamhepo paHawks Chitoro. Iwe unowana zvakasiyana zvezvinhu iwe zvaunogona kushandisa, kubva kune USB madhiraivha uye tumblers kune zvipfeko, uye Hodges Hawk! Chii chinoita kuti chitoro chedu chisiyane? Kune kutenga kwese kwakaitwa, chikamu chemari yacho chinoenda kuHawks Scholarship Fund.